Alahady 12/07/2015 : Toriteny – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Inona no ilana ny “tehina”? Voalohany, ny mpiandry ondry no mitondra tehina; manaraka izany, ny tehina, rehefa mandeha lalana lavitra, dia afaka itehenana rehefa reraka sy manampy hijoro ; fa ny tehina ihany koa dia ahafahana miaro tena eny an-dalana. Ny hevitry ny hoe “Ny tongotra no asiana kapa” kosa dia : mba tsy hanavesatra satria lavitra ny lalana. Izay no hafatr’i Jesoa tamin’ireo mpianany.
Fa ankoatra izay dia naniraka ireo mpianany ireo “tsiroaroa” i Jesoa. Misy dikany ihany koa io hoe tsiroaroa io. Ao amin’ny Deterônômy dia milaza hoe : “Mba ho azo antoka ny fahamarinan’ny zavatra iray dia tsy maintsy olona roa ”. Ny Evanjely eto dia mampiseho fa tsy voatery ahomby akory ny fitoriana ny Vaovao Mahafaly : “Raha misy tsy mampiantrano anareo, dia mialà ao… Ahitsano ny vovoka amin’ny tongotrareo hiampangana azy”. Inona ny dikan’ny hoe : Ahitsano ny vovoka amin’ny tongotrareo hiampangana azy? Ny fomba fandraisana olona, amin’ny Jody, dia omena rano ilay vahiny anasany tongotra ka raha tsy nandray ireo ao amin’ny trano nidirana dia mbola miraikitra eny an-tongotr’ilay vahiny ny vovoka azony teny an-dalana nentiny niditra tamin’io tokantrano io. Izany hoe: efa tsinjon’i Jesoa sahady ny mety ho tsy fahombiazan’ny fitoriana ny Vaovao Mahafaly. Tsy voatery ahomby foana isika, fa ny anjarantsika dia ny mandeha, ny miasa, ny mitory. Ary ny fitoriana dia tsy hoe hisy kabary tsara lahatra : mitory teny eny amin’ny arabe, any amin’n yradio sy fahitalavitra … fa araka ny tenin’i Jesoa dia “fiainana tsotra” , ny “fisehon’ny fiainantsika andavanandro” no fitoriana ny Vaovao Mahafaly. Rehefa mifarana ny Sorona Masina dia hoy ny Pretra: “Hitantana ny diantsika anie i Kristy” , maniraka antsika hiasa, hitory io teny io, ka ny tenantsika aloha no itoriantsika voalohany (izao ny Tenin’Andriamanitra androany, ny fampianarana azo raisina, ny fahasoavana azoko androany …), avy eo ao amin’ny ankohonana : mifampizara amin’ny ao an-tokantrano izay tadidy tamin’ny fampianarana azo tany am-piangonana. Ny fihetsika ataotsika, ny teny mivoaka ny vavatsika, ny fijeritsika, ny fiainantsika dia efa fitoriana ny Vaovao Mahafaly.Manaraka izany, mivelatra amin’ny fiarahamonina, mitatra tsikelikely satria nirahina isika mba hijoro ho vavolombelona, hitory ny Vaovao Mahafaly. Ankoatra izay, any amin’ny sehatra iasantsika tsirairay avy any (na any amin’ny birao na any an-tsaha …,), misy tsy mitsinjo ny manodidina azy mihitsy fa izay mahasoa ny fiainany ihany. Marina fa sarotra izany mitory ny Vaovao Mahafaly izany ary izany no mahatonga ny hoe tsy voatery ahomby foana isika, ary izay no nahatonga an’i Amosy noroahin’ny olona (Vakiteny I): “Mandehana ianao miverina any Joda any amin’ny faritaninao, fa aza maminany aty aminay aty.” Noroahin’ny olona i Amosy satria sahy nanindrontsindrona ireo mpitsetsitra, mpanambaka ny madinika tamin’izany andro izany ka tsy zakan’izy ireo izany. Tsy mora ny mitory ny Vaovao Mahafaly : ho halan’ny olona isika, ho enjhin’ny olona isika rehefa mijoro amin’izay maha-Kristianina antsika izay. Fa hoy i Jesoa tamin’ireo Apôstôly : “Rehefa naniraka anareo aho ka niteny hoe aza mitondra na inona na inona, moa orin-javatra va ianareo teny an-dalana? ” , “Tsia”, hoy ireo mpianatra. Ny dikan’izay dia mahatoky ilay antso maniraka antsika ; ary izay no maha-zava-dehibe sy anton’ilay tsodrano hoe “hitantana ny diantsika anie i Kristy”.
Izay no angatahintsika amin’ny Tompo amin’izao herinandro vaovao izao, mba ho sahy hitory ny Evanjely ny tsirairay : miainga amin’ny tena aloha ny voalohany (Inona ny fibebahana tokony ataoko amin’izao herinandro vaovao izao?) amin’ny alalan’ny fampiharana ny sitrapon’Andriamanitra amin’ny fiainantsika, ny fijoroana amin’ny fahamarinana amin’izay atao rehetra ; dia ho voatarika ho azy ny olona hanantona an’Andriamanitra.